Fanambarana momba ny tsiambaratelo - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Fanavaozana ny vokatra
Sarontava azo arovana
Dynamics amin'ny serivisy
Raharaha momba ny serivisy
Fanamarinana ny orinasa
Fandraisana mpiasa sy fanofanana talenta
Ianao sy ny marika AKF an'ny AKF Medical Technology Co., Ltd. (etsy ambany antsoina hoe "AKF"), dia mety angatahina aminao hanome fampahalalana manokana. Ity mombamomba anao manokana ity dia mety zarain'ny AKF mifanaraka amin'ity politika manokana ity. Ity fampahalalana manokana ity dia azo ampifandraisina amin'ny fampahalalana hafa ary ampiasaina hanatsarana ny vokatra, programa na serivisy sns.
Ireto misy ohatra sasany momba ny karazana fampahalalana manokana azon'ny AKF angonina sy ny fomba hampiasantsika azy.
Araka ny lalàna, dia hanangona, hampiasa, hitandrina ary hampahafantatra ny mombamomba anao amin'ny toe-javatra manokana izahay. Ireto teny manaraka ireto dia manoritsoritra ny fomba fanangonana, fampiasàna, fitehirizana ary famoahana ny mombamomba anao manokana.
1 、 Fanangonana ny mombamomba anao
1.1 、 Ireo fampahalalana manokana ampiasainay, ampirimina ary ambaranay hanomezana tolotra ho anao amin'ny famoronana kaonty, hamantatra ireo mpampiasa, hamaly ny fanontanianao sy ny mailaka.
Rehefa mamorona kaonty tranokala AKF ianao, mividy na misoratra anarana ny vokatra AKF, misintona rindrambaiko AKF sy ireo fanavaozana azy, misoratra anarana amin'ny fivarotana antsinjarany AKF an-tserasera na mandray anjara amin'ny fifandraisana hafa amin'ny orinasa AKF, dia hangataka aminao izahay hanome vaovao manokana, ao anatin'izany ny tsy voafetra amin'ny anaranao, nomeraon-telefaona, adiresy mailakao sns.
Azonay atao ny manambatra ny fampahalalana izay arotsakao amin'ny alàlan'ny kaontinao manokana miaraka amin'ny serivisy AKF hafa na ny fampahalalana avy amin'ny antoko fahatelo mba hanomezana anao traikefa tsara kokoa sy hanatsarana ny kalitaon'ny serivisinay.
Raha mameno ny mombamomba anao amin'ny sehatra misokatra hafa ianao, dia mety hampahafantarina ireo mpampiasa anao ny momba anao.
1.2 、 ny mpizara anay (nomen'ny antoko fahatelo) dia mety manangona vaovao momba ny fitaovanao amin'ny finday, toy ny saingy tsy ferana amin'ny maodely, ID fitaovana, adiresy protokolan'ny Internet, fotoana sy toerana misy ny fitsidihanao, fonosana fanodinana, mpandefa ary mpandray vaovao (fa tsy ny fampahalalana akory), ary koa ny fampahalalana voarakitra an-tsoratra hafa manana toetra mampiavaka azy mba hanamorana anao hitety ny tranokala AKF sy hampiasa ny vokatra AKF.
Hampiasa cookies sy tahirin-kevitra momba ny fitetezana toy ireo mpikaroka loharano (URL) mitovy izahay hanangonana ny fotoana sy daty hidiranao, hikarohana sy hijerena fampahalalana, sns.
2, Fampahalalana manokana amin'ny fampiasana
2.1 、 AKF dia hanaja tanteraka ny atiny voalaza ao amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ary hampahafantatra anao ara-potoana aorian'ny nanavaozana ity politika momba ny tsiambaratelo ity. Ny mombamomba anao manokana dia hampiasaina amin'ny tanjona voafaritra amin'ny fotoana fanangonana ihany. Raha misy tanjona hafa dia hangataka mialoha ny fanekenao izahay
2.2 、 Ny mombamomba anao manokana izay angoninay dia hampiasaina hanatsarana ny serivisinay, ny vokatra ary ny atiny mifandraika amin'izany, ary ny fampandrenesana dia halefa aminao amin'ny fotoana voalohany rehefa havaozina sy avoaka ny vokatra AKF, programa na serivisy. Zonao ny misafidy ny tsy handray fampandrenesana toy izany amin'ny fomba voatondro.
3 、 Fanambarana fampahalalana manokana
3.1 、 Afa-tsy ny famoahana voafaritra voafaritra ao amin'ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia hitazona tsara ny mombamomba anao izahay ary tsy hampahafantatra ny lisitry ny mombamomba ny mpanjifa.
3.2 、 Manome alalana anay izahay hampahafantatra ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo raha tsy misy ny fanekenao amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
3.2.1 、 Raha mampahafantatra an'ity fampahalalana ity izahay ho an'ny tanjona amin'ny Famantarana, ny fifandraisana na ny fanenjehana izay hetsika mety hiteraka fahasimbana amin'ny zonay na ny fanananay, ireo mpampiasa tranonkala na olon-kafa (ao anatin'izany ny zon'olon-kafa sy ny fanananay).
3.2.2 、 Manome fampahalalana manokana ho an'ireo mpiara-miasa aminay, mpiara-miasa na orinasa matoky hafa izahay na olona hikarakarana ny mombamomba anay amin'ny anaran'ny orinasa misy anay.
Izahay dia mitaky ireo antoko etsy ambony hanaiky ny fanodinana izany fampahalalana izany arakaraka ny lalàna mifehy anay, ity politika momba ny tsiambaratelo ity ary ny fepetra tsiambaratelo sy fiarovana azo ampiharina rehetra
3.2.3 、 Ho an'ny fanadihadiana ara-dalàna.
3.2.4 、 Ny famoahana toy izany dia ilaina amin'ny taratasy fiantsoana na taratasy hafa navoakan'ny lalàna na hotaterina aminay.
4.1 、 Ho anay dia tena ilaina ny fiarovana ny mombamomba anao. Hanao ezaka ara-barotra araka ny antonony izahay hiantohana ny filaminan'ny mombamomba anao ary hampihatra ny fomba ara-barotra mety hamerana ny fidirana tsy ara-dalàna, amin'ny fampiasana na fampahafantarana ny mombamomba anao. Na eo aza ireo fepetra etsy ambony ireo dia tokony ho fantatrao fa ny AKF dia tsy afaka misoroka tanteraka ny risika fiarovana mifandraika amin'ny mombamomba anao
4.2 、 Tokony hanampy anay hiaro ny mombamomba anao ianao. Aza ambara, ohatra, ny teny miafinao manokana. Rehefa vita ny fizahana ny tranokala AKF dia mivoaha ny kaontinao.
4.3 、 Rehefa mampiasa vokatra AKF, programa na serivisy sasantsasany ianao na mandefa amin'ny sehatra tambajotra sosialy toy ny forum AKF, ny fampahalalana omenao dia hovakin'ny mpampiasa hafa. Raha manolotra ny mombamomba anao amin'ny toe-javatra voalaza etsy ambony ianao, dia ho tompon'andraikitra amin'ny vokany ratsy.
5 websites Tranonkala sy serivisy antoko fahatelo
Ny vokatra, programa ary serivisy AKF dia mety misy rohy na fampahalalana momba ny vokatra sy serivisy an'ny antoko fahatelo. Ny vokatra sy serivisy AKF dia mety mampiasa na manome vokatra na serivisy avy amin'ny antoko fahatelo.
Ny fampahalalana azon'ny antoko fahatelo izay mety misy tsiambaratelo momba ny fiainany dia miankina amin'ny politikan'ny tsiambaratelon'ny antoko fahatelo. Miangavy anao izahay hamaky ny politika momba ny tsiambaratelon'ny antoko fahatelo.
5.1 、 Rehefa tsindrio ireo tranokala hafa mifandraika amin'ity tranonkala ity dia miala amin'ny tranokalanay ianao ary mitsidika tranonkala hafa. Ny tranokala hafa dia mety manangona ny mombamomba anao manokana na data tsy fantatra anarana. Noho izany, tsy afaka mifehy, manamarina na mamaly ireo vohikala sy votoatin'ny tranonkala toy izany izahay. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana nateraka na azo atao izahay Noho ny tranokalan'ny antoko fahatelo mifandray amin'ity tranokala ity manangona mombamomba anao na angon-drakitra tsy fantatra anarana raha tsy mahazo alalana.
5.2 、 Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia tsy mihatra amin'ny fanangonana tahirin-kevitra avy amin'ny tranonkala ivelany aorian'ny fanindriana ny rohy.
6 、 Fanangonana sy fampiasana ny mombamomba ny tanora.
6.1 、 Manoro hevitra ireo zaza tsy ampy taona latsaky ny 18 taona izahay hitsidika ny tranokala AKF ary hividy entana miaraka amin'ny alalana sy fitarihan'ny mpiambina azy ireo ara-dalàna.
6.2 、 ​​Ny AKF dia tsy hampiasa ny mombamomba ny zaza tsy ampy taona, na hampahafantatra ny mombamomba azy amin'ny antoko fahatelo. Manan-jo handà ny AKF sy ireo mpiara-miasa aminy ny mpiambina mba hanangona bebe kokoa ny mombamomba ny paroasy, na angatahina amin'ny AKF sy ireo mpiara-miasa aminy hamafa ny mombamomba ny paroasy.
7 、 Fanitsiana an'ity politika momba ny tsiambaratelo ity.
7.1 、 Ity politika manokana ity dia mamela ny fanitsiana.
Raha tsy misy ny fahazoan-dàlana mazava anananao dia tsy hampihena ny zonao izahay amin'ny alàlan'ity politika manokana ity.
Fakan-kevitra momba ny serivisy
Plant E6, Ind. Tech Park, Xixiu Zone, Liangliu Road, Xixiu Dist., Anshun, Guizhou, Sina